China Eco enyi na enyi uzuzu uzuzu akpụkpọ ụkwụ akpa Factory omenala Logo Polyester Drawstring azu paaki Nsuputa na Suppliers | Tongxing
Akpa anaghị kpara akpa
Akpa akpụkpọ ụkwụ anaghị ekpuchi uzuzu Eco Enyi na Enyi na Akara Akara Polyester Drawstring akpa akpa
Size: Ihe dịka 30 * 40 cm, ma ọ bụ ahaziri ya
Logo: Enwere ike ịhazi ya
Agba: Dị ka foto, ma ọ bụ agba ndị ọzọ
Nkwakọ ngwaahịa: 1 pc / opp akpa
Oge nlele ahaziri: 5-7 ụbọchị
Oge ndu nnukwu: Mgbe enwetara nkwụnye ego ụbọchị 25-30, ma ọ bụ dabere na ọnụọgụ n'usoro
Port: Shenzhen ma ọ bụ Guangzhou
1. [Ihe dị oke mma]100% polyester na-eguzogide iyi. Uwe ahụ dị nro ma na-eku ume, uzuzu na-eguzogide ọgwụ, na-echebe ihe gị site na mmebi. Akpa drawstring anyị dị mfe ihicha yana megharịa ya, na-eme ka ha bụrụ nhọrọ dị mma maka ndụ kwa ụbọchị na ahụike.
2. [Nha buru ibu] Ọ dabara nke ọma maka ịhazi na ịchekwa ihe, dị ka: akpụkpọ ụkwụ, karama, akpa aka, uwe oge, akpụkpọ ụkwụ, akpụkpọ ụkwụ, ngwa, ihe ịchọ mma, ụlọ mposi, ihe egwuregwu ụmụaka, obere ngwaahịa eletrọnịkị, wdg.
3.[Ejiji na-adịgide adịgide]Akpa drawstring dị fechaa nke nwere ụkpụrụ mara mma na nke na-egbuke egbuke bụ ihe nkwado zuru oke na usoro ụlọ gị, njem ma ọ bụ mgbatị ahụ. Ọ bụ nhọrọ kacha mma maka ime ime ma ọ bụ n'èzí ọ bụla yana onyinye kacha mma maka ndị enyi na ezinụlọ.
4.[ Kwesịrị ekwesị maka iji ụbọchị na njem.Akpa uzuzu uzuzu ahaziri ahazi abụghị naanị na-edobe ihe gị n'ọnọdụ dị mma, kamakwa ọ bụkwa akpa nchekwa njem zuru oke. Dị fechaa na mpịaji iji chekwaa oghere akpa ma mee ka nkwakọ dị mfe. Biko mara na nke a abụghị akpa azu, daalụ.
1. Banyere nha: N'ihi nha akwụkwọ ntuziaka, enwere ike inwe mperi nke 1-2 cm n'ogo. Emebere nha ndị a iji nyere gị aka ịhọrọ nha ziri ezi. Biko tụọ n'onwe gị wee họrọ nha kwekọrọ.
2. Banyere agba: Agba nke ihe ahụ nwere ike ịdịgasị iche dabere na ngosipụta akọwapụtara, ntọala na ọnọdụ ọkụ. Agba nke ihe ndị ahụ egosipụtara bụ naanị maka ntụnye aka.
Nabata na omenala akpa gị, ajụjụ ọ bụla biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị, anyị nwere obi ụtọ inyere aka, ọtụtụ ekele.
Nke gara aga: Akpa ozi akpa ụmụ nwanyị mara mma akwa akwa obere akpa
Osote: Ngwaahịa ahaziri iche China Korean ụdị nke ụmụ akwụkwọ sekọndrị Ubu akpa àgwà Corduroy kọleji Nwanyi akpaachi
akpa drawstring omenala
akpa polyester omenala
Akpa azụ Drawstring
Ụlọ ihe nkiri akpa Drawstring
Akpa akpụkpọ ụkwụ anaghị ekpuchi uzuzu
Akpa onyinye ekeresimesi Drawstring maka swiiti, Chocol...
Ihe ndozi ụlọ kacha mma niile ebipụtara mara mma
Akpa dị ọcha nke linen Drawstring dị elu maka Groc ...
Green Design Jewelry Velvet akpa Drawstring Flan...
Akpa azụ dị mma n'ahịa maka mmiri mmiri na F...
Nkwalite akpa ihe osise polyester dị elu...